Otu esi eme ka ọ bụrụ na ị nọgide na-emekarị ma ghara ịla n'iyi: ejiji ejiji KUPIVIP.BY
Ndị ọkachamara nke KUPIVIP.BY - ụlọ ahịa na-ere n'Ịntanet nke uwe akwa, akpụkpọ ụkwụ na ngwa - kwuru banyere ụkpụrụ nke ejiji ejiji. Ndepụta nke ụlọ ahịa ahụ na-eweta ngwongwo nke ọtụtụ puku ụdị ego na ego ruru 90%.
Gini mere i ji enweta nnukwu ego?
Ụlọ ahịa ịntanetị KUPIVIP.BY adịghị arụ ọrụ na intermediaries. Niile ngwongwo na - egosi na ya - kpọmkwem site na Europe. Nke a na-enye gị ohere ịgbanwe ọnụahịa ma jidekwa mkpa nke ịnakọta.
Kedu ka njikwa ahụ si agbazi inye nnukwu ego? Ọ bụ banyere ụkpụrụ nke ọrụ European boutiques nke na-ere ngwaahịa. Ndị na-emepụta anaghị enwe oge ha ga-ere ihe ndị ọzọ tupu e wepụta ihe ọhụrụ na ịnakọta iji belata ọnụahịa.
ONYE na-achọ maka onyinye ndị yiri ya, na-akpakọrịta na ụdị na ụlọ ejiji na-akpọsa ire ere, nke na-adịkarị nanị 1-3 ụbọchị. Ntughari adịghị njikere ịnye ego maka oge dị ogologo, ebe nke a nwere ike imetụta ahịa nke nnukwu nnakọta. Ntaneti na-enye naanị ihe ndị enyere n'iwu. Nke a na-ebelata ụgwọ nke nnyefe, na-enye gị ohere ka ị ghara imechi ụlọ nkwakọba ihe ahụ ma na-emetụtakwa ịmepụta ahịa. Enwere ike ịchọta onyinye ugbu a na saịtị ebe ị na-ahụ maka KUPIVIP BY.
Ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka a mara na ihe niile dị mma. Ndị a na-elele anya site na ngalaba nchekwa na àgwà njikwa ngalaba nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. A na-anwale ihe ọ bụla tupu ebufee na onye ahịa.
Kedu ihe na ere?
Na ego ruru 80% (n'ọnọdụ ụfọdụ elu) ịnwere ike ịzụta ngwa ngwa na uwe Trussardi. Ruo 85% nwere ike ịchekwa na uwe na akpụkpọ ụkwụ nke ejiji nwoke nwoke Pal Zileri. O doro anya na ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ga-aṅa ntị n'ihe ndị ruru 90% nke French BGN. Ndepụta ụdị na nkwado nkwado nwere ike ịdị ogologo oge. Ọ ka mma ịhụ ihe niile n'anya gị.
Kedu ka esi ahazi saịtị
Ịchọta ihe ndị dị mkpa na ntanetị nwere ike ịbụ site na ụdị na nzube: maka ndị inyom, ụmụ nwoke, ụmụaka, ngwaahịa ụlọ, akpụkpọ ụkwụ, uwe, akpa na ngwa. Ego kachasị na-adịbeghị anya bụ nke dị iche iche. A na-ewepụta ahịa kachasị mma na ngalaba kwekọrọ.
Ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ụlọ ọrụ dị na Russia, Belarus na Kazakhstan. Otu nkewa dị iche bụ nkewa ọrụ nke Ụlọọrụ E-Commerce.
Ọpụpụ anọwo na-arụ ọrụ kemgbe afọ 2008. Onye malitere ya, Oscar Hartmann, bụ onye mbụ na Russia iji mejuputa ụdị ahịa e-commerce na Russia, mgbe nkwalite nke ụdị ndị a ma ama na-ekere òkè na ahịa ndị mechiri emechi, bụ ndị naanị ndị ọrụ edebanye aha nwere ohere. Ụlọ ọrụ ahụ weghaara ndebanye aha na afọ 2014 ma bụrụ ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ndị isi a ma ama na azụmahịa e-azụmahịa na Russia.
Akpụkpọ ụkwụ maka ịgba egwu ndi mmadu
Ewube ụlọ maka ndị ime ime
Egwuregwu ejiji - 45 foto nke ụdị kacha mma maka ọ bụla uto
Ịzụ ahịa na Tunisia
Tamaris akpụkpọ ụkwụ
Nkpuchi nkpuchi nkpuchi n'okpuru mink
Anwle akpụkpọ ụkwụ Tamaris
Nwee akwa na n'elu
Sneakers - ihe ha ga-eji sneakers na-egbuke egbuke mbụ?
Mgbanwe mgbanwe na mammary glands
Ebube agbamakwụkwọ site na beads
Ụdị American n'ime ime
Poteto na anụ na oven
Paparazzi sere onyinyo obere nwa Charlize Theron
Mgbawa mgbe ọgwụ nje na nwa
Kendall Jenner chefuru iji zoo ihe otutu ya
Vitacci akpụkpọ ụkwụ
Chicken na mmanụ aṅụ na oven
Ihe nke pancakes
Dysarthria na ụmụaka - ọgwụgwọ
Ọnụ ụzọ nke ụlọ
Cocktail B-52 - uzommeputa
Kedu otu esi izute nwoke?
Uwe mkpuchi isi - 45 kachasị mma maka oge niile
Kedu esi eweghachi mbọ mgbe e wuchara ya?
Kissel si jam - uzommeputa